"Waini Yakare" Musika Simuka, RFID Retrospective Anti-counterfeiting Inoratidza Unyanzvi Hwayo | Toptag
“Mumakore gumi apfuura, ndinonzwa zvakadzama zvikuru. Doro rakatsiva waini tsvuku mukudya kwemabhizimusi. Mumakore maviri kana matatu apfuura, zvave pachena kuti doro rakasiyanisa doro rekare kubva kune zvimwe zvinwiwa. Doro rekare rinogona kutaura dzimwe nyaya. ” Sachigaro wePAX uye Chief Research Officer Hu Run akataura zvimwe shanduko mumusika wedoro mumaziso ake.
Vhura iyo APP kuti uverenge iyo yazvino mishumo. MuChina, kushanyira hama neshamwari, uye kushanyira varaidzo kwakakosha newaini tsika. Nekuvandudzwa kwemararamiro ehupenyu hwevanhu, izvo zvinodikanwa zvehunhu hwewaini zvinogara zvichichinja. Mumakore achangopfuura, "kunwa waini yakare" yakave yakakurumbira Up.
Waini tsaru inotsvakwa nemusika, uye mutengo wekuzivikanwa wega wakakwira
Iyo inonzi waini tsaru iwaini yakachengetwa kwenguva yakareba, senge Moutai anopfuura makore gumi apfuura. Iine "kunwiwa kunwiwa" kwedoro, waini yakare yakave ichinyanya kuzivikanwa nevatengi, uye pfungwa ye "waini yekare = waini yakanaka" zvishoma nezvishoma yakave inozivikanwa. .
Munguva pfupi yapfuura, Hurun Research Institute yakaburitsa iyo "2020 China Old Wine White Paper". Sekureva kwedhata riri mupepa chena, 87% yevakabvunzurudzwa vanonwa-vane mutengo wepamusoro vakati vanofarira waini yekare, uye 84% vakati vane shungu dzakasimba dzekutenga. "Kuti" unwe waini yekare ", shanduko iyi mune pfungwa yakaenderera mberi ichikurudzira kuwedzera kuri kuwedzera kwemusika wewaini wekare. Zvinoenderana neshumo ye "China Old Wine Market Index", zvinotarisirwa kuti muna 2021, saizi yemusika wewaini yakare inodarika mabhiriyoni zana.
Kuzivikanwa kwevatengi uye kukura kwemusika musika hakungobatsire iyo "yewaini yekare" chikamu, asiwo kunounza mamwe matambudziko kumusika wewaini wekare. Rimwe rematambudziko makuru nderekugonesa vatengi kutenga waini yekare chaiyo nechivimbo.
Munguva yakapfuura, matsotsi mumusika wewaini wekare aigara achishandisa nzira dzakasiyana siyana kutevedzera waini yekunyepedzera kuita purofiti hombe. Uye zvakare, iwo akasiyana ma winery uye anowanzo kurongedza iterations zvakare yakawedzera yakawanda mari yekuzvizivisa pachako kweyakare waini. Tora Moutai semuenzaniso. Mugore rapfuura chete, zvikwangwani zvishanu zve "nyika yewaini Moutai" pane zvakaputirwa uye zvishongedzo zvezvigadzirwa zvitsva zveMoutai zvakatsiviwa ne "Kweichow Moutai" trademark. Izvi pasina mubvunzo zvinokonzeresa kutsausa vatengi kune avo vasingawanzo kusangana newaini yekare.
Kugadzirisa dambudziko iri nekusimudzira kuvandudza kweindasitiri, hunyanzvi hwekutsvagisa hunyanzvi hwakatora danho.
Block chain anti-counterfeiting traceability, waini yakare inodawo kuverengerwa
Tora Moutai semuenzaniso. Sechinhu chinonyanya kuzivikanwa chinwiwa chinodhakwa / chewaini, pane atove akawanda "maitirwo" paInternet kubatsira vatengi mukuziva chokwadi chewaini dzekare, sekutarisa pane zvakadzama zvebhodhoro, kuvhara kapu yerabha, uye anti-manyepo. MaManual uye dzimwe nzira dzekunze, asi nzira iyi yekuzivikanwa kwekunze neziso rakashama ichaita nguva yeku "kubaya ziso", saka kuzivikanwa nenzira dzehunyanzvi kwakanyanya kukosha.
Panyaya yekuzivikanwa kweMoutai, anti-counterfeiting traceability system yakaburitswa neMaoyou Commune neBeijing Moutai Cultural Research Association yatambirwa zvakanaka. Maoyou Commune inzvimbo inozivikanwa yekuchinjana ruzivo rweMoutai, kuzivikanwa uye tsika mudenderedzwa rehama dzeMaoyou. Tekinoroji ingabatsira sei vatengi kuziva waini dzekare? Tinogona kuwana zvishoma zveiyo anti-yekunyepedzera traceability system yeMaoyou Commune.
Kuti zvitaurike, iyo anti-counterfeiting traceability system inoreva kuti bhodhoro rega rega reMoutai rine rakasiyana "kadhi kadhi", iro rinonyora ruzivo rwekutanga rwebhodhoro reMoutai, senge gore, mavambo, nezvimwe, izvo zvinogona kuzivikanwa nekutarisa macode uye maRFID machipisi. Nzira yekusimbisa waini yekare.
Pamusoro pechinyakare anti-counterfeiting traceability, Maoyou Commune inoshandisa tekinoroji yedhijitari kusimudzira anti-yekunyepedzera traceability system. Chekutanga pane zvese, Maoyou Commune uye JD Dhijitari Co, Ltd. yakaunza block muyo "See Zhen" anti-counterfeiting traceability system. Chain tekinoroji, iyo decentralization, kuvhurika, kujekesa, uye isiri-tamperability ye blockchain tekinoroji inoita anti-yekunyepedzera traceability tekinoroji ive yakavimbika.
Uye zvakare, Maoyou Commune uye nekodhi kodhi yacho pachayo yakagadziridzwa nekuvandudza iwo ekutanga mapepa kuRFID chip stickers. Iyo itsva vhezheni yezvinamirwa yakanyanya kuomera kuteedzera, iyo inowedzera mutengo wekunyepedzera. Panyaya yekushomeka, "Ona Zhen System" yakagadzirawo yega WMS + zvigadzirwa zvekuchengetera manejimendi manejimendi manejimendi, uye maitiro ese eMoutai doro rekuparadzira rakajeka.
Kubudikidza nedhijitari tekinoroji uye kumisikidzwa kweanopokana-nekunyepedzera kutsvaga nzira, doro rekare reMoutai rinotengeswa neMaoyou Commune rawana "chaiyo" uye "trackable". Kune vatengi, ivo vanongoda kungovhura yavo nharembozha uye tarisa kodhi yacho kuti vakwanise kutenga yavo yavanofarira waini yekare nechivimbo uye kudzidza nezve inoenderana iyo waini ruzivo.
Indasitiri yewaini yekare yakatanga, uye tekinoroji yakabatsira indasitiri iyi kukura nenzira yakarongeka
Kunyangwe iri yekunwa-wega, kupa zvipo, kana kuunganidza mari, zvinoita sekunge kukosha kwewaini yakare kuri kuramba kuchikwira, uye kuseri kwemusika uyu kuputika, ichiri kudikanwa kutsigirwa neakanaka musika odha.
Kune vatengi, kusahadzika kwekutenga waini yakare kunonyanya kuve mune yechokwadi uye sosi yewaini. Iyo See Zhen system yakatangwa naMaoyou Commune kurwisa chaiko pamarwadzo eaya mativi maviri. Panyaya yekuzivikanwa, Maoyou Commune ane makore anopfuura gumi echiitiko chekutsvagisa cheMaotai uye vimbiso yakapetwa yeboka rine simba rekuongorora waini. Panyaya yekutsvaga, Maoyou Commune inoshandisa blockchain nehumwe hutekinoroji matekinoroji kuunza uye kuyedza kuteedzera iro rewaini kutenderera ruzivo mukati meichi chiitiko. Dhijitari yekurekodha nekugadzirisa. Iko kusanganiswa kwechokwadi uye kutsvagisa zvechokwadi kunogadzira yakavharwa-loop system, iyo inopa nyore kune vatengi kubvisa kusava nechokwadi kwavo nezvekutenga waini yekare.
Senge Maoyou Commune, iyo inoshandisa tekinoroji yedhijitari kuvaka iyo yakazara sisitimu yechokwadi uye kuronda kweMoutai waini yakare, inopa mhinduro dzinoshanda kune zvinorwadza zveiyo indasitiri yewaini yekare pamusoro pemakore, uye kune imwe nhanho inosimudzira kuvandudzwa kwese indasitiri. Ndinotenda mune ramangwana. Tekinoroji ichapawo vimbiso yakasimba yehutano hwakanaka uye hwakarongeka kuvandudza indasitiri yewaini yekare.